Wararka Xanta Suuqa Kala Iisbiga Iyo Wargeysyada Yurub Ee Maanta: Messi, Aguero, Haaland, En-Nesyri, Wan-Bissaka, Hazard, Mbappe
HomeHoryaalada KaleWararka Xanta Suuqa kala iisbiga iyo Wargeysyada Yurub ee maanta: Messi, Aguero, Haaland, En-Nesyri, Wan-Bissaka, Hazard, Mbappe
February 5, 2021 Horyaalada Kale, Horyaalka France, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Weeraryahan Lionel Messi, oo 33 jir ah, lama uusan xiriirin cidna Paris St-Germain ama Manchester City. Qandaraaska weyn ee reer Argentine ee Barcelona ayaa dhacaya xagaaga laakiin wuxuu sugi doonaa ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka inuu go’aansado inuu sii joogayo iyo inuu aadayo. (Goal)
Haddii Messi uu ka tago Barcelona, weeraryahanka Manchester City iyo xulka Argentina Sergio Aguero, oo 32 jir ah, ma xiiseynayo u dhaqaaqista Nou Camp. (Cadena SER)
Manchester City ayaa xagaaga u dhaqaaqeysa saxiixa weeraryahanka Borussia Dortmund iyo xulka Norway Erling Braut Haaland, oo 20 jir ah (Mirror)
West Ham ayaa la filayaa inay dalab kale ka gudbiso weeraryahanka reer Sevilla ee reer Morocco Youssef En-Nesyri, 23, xagaagan. (Xiddig)
Kylian Mbappe ayaa doonaya inuu ku biiro Real Madrid, sida uu yiri Jese Rodriguez, oo ah saaxiibkiisii ​​hore ee Paris St-Germain oo ay wadaagaan 22 jirka weerarka ka ciyaara ee reer France. (Marca)
Daafacii hore ee Manchester United Fabio da Silva ayaa sheegay in kooxda ka dhisan Old Trafford ay la soo saxiixato daafac midig oo cusub si ay ugu dhiirigeliso Aaron Wan-Bissaka, oo 23 jir ah, meel sarre. (Manchester Evening News)
Daafaca reer Serbia Aleksandar Kolarov, 35, iyo daafaca dambeedka midig ee reer Talyaani Matteo Darmian, oo 31 jir ah ayaa labadoodaba la filayaa inay ka tagaan kooxda Inter Milan xagaagan. (Gazzetta dello Sport)
Real Madrid waa inay tixgelisaa iibinta ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Belgium Eden Hazard, 30, ayuu yiri weeraryahankii hore ee Bulgaria Dimitar Berbatov. (Marca)
Lix kooxood oo Premier League ah ayaa ciyaari kara Champions League laga bilaabo 2024. Soo jeedinta Uefa waxay arki doontaa in kooxaha ay ciyaaraan min 10 kulan oo guruub ah, halka Europa League laga yaabo in la yareeyo cabirkooda. (Telegraph)
Kooxaha ugu waa weyn Yurub waxaa la siin doonaa fursado muhiim ah si ay ugu ciyaaraan Champions League xitaa haddii ay ku guuldareystaan ​​inay ku dhameystaan ​​afarta ugu sareysa tartamada maxaliga ah, iyadoo la raacayo qorshayaasha Uefa ee loo muujiyey kooxaha Premier League khamiistii. (Times )
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee reer Ukraine Marian Shved, oo 23 jir ah, ayaa sheegay inuu qalad ku galay ku biirista Celtic halkii uu ka noqon lahaa Genk labo sano ka hor. Shved ayaa haatan amaah ugu jooga Mechelen kooxda ka dhisan horyaalka Scotland. (Glasgow)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Spain ee kooxda Barcelona Sergi Roberto, oo 28 jir ah, ayaa lix todobaad garoomada uga maqnaan kara dhaawac lugta ah taasoo la micno ah inuu seegi doono kulanka Champions League ee ay la ciyaarayaan Paris St-Germain. (Mundo Deportivo)
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee Arsenal Jeff Reine-Adelaide, 23, ayaa laga yaabaa inuu maqnaado muddo dheer ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray jilibka. Xiddiga reer France ayaa amaah ugu jooga kooxda Nice kooxda Lyon. (RMC Sport)